Amakhompiyutha, Ubuchwepheshe bolwazi
Wonke umuntu ufuna ukuthola konke ngaphandle komzamo. Kungenxa yobuvila bomuntu ukuthi kuvele inqubo enjengama-25 ozimele futhi yathandwa kakhulu. Kuyamangalisa kakhulu: vele uhlale, ubuke esikrinini, ungenzi lutho, futhi ulahlekelwe isisindo ... Kungenzeka yini ukuthi ulahlekelwe isisindo ngendlela enjalo? Ingabe indlela iphumelela, njengoba ithi ngakho ekukhangiseni? Kulesi sihloko, sizobukeza ubuchwepheshe befreyimu angu-25 ezindaweni ezivame kakhulu: ukulahlekelwa isisindo, ukukhuliswa kwemali, ukufunda isiNgisi nokuphathwa kwezidakamizwa. Ngakho-ke, ake siqale.
25 ozimele - yini lokhu?
Kukhona inamba yocwaningi ezama ukulungisa lobu buchwepheshe kusukela ekubukeni kwesayensi. Bachaza ngale ndlela: noma yimuphi umfanekiso wevidiyo uqukethe izithombe ezishintshayo ngokushesha ezakha ukulandelana kwevidiyo. Uma kulolu chungechunge lwevidiyo kufaka ama-25 ozimele ngolwazi oluthile lwazi, ngakho ngeke lubonwe ngeso lomuntu. Kodwa ezingeni lokungaqondakali, ubuchopho buzorekhoda lolu lwazi futhi, ngokusekelwe kulo, luqondise ukuziphatha komuntu okuqhubekayo .
Manje uyazi ukuthi uhlaka lusebenza kanjani. Ake sithole umlando walendlela. Ngokokuqala ngqa, umphakathi jikelele uzwile ngalesi simo phakathi nekhulu leminyaka elidlule. Yingaleso sikhathi lapho baqala ukuqhuba ukuhlolwa kokuqala kwezebhizinisi, ngokusungulwa kokungeniswa kwesigcawu esengeziwe esithwele ulwazi oluthile. Umsunguli womqondo nguJacob Weikeri, ophakamise ukufaka imishwana ebhayisikobho. Phakathi nokuboniswa kwesithombe, bavele esikrinini kuphela ku-1/25 kweyesibili. Kusobala ukuthi izethameli zazingenaso isikhathi sokuzilungisa. Kodwa-ke, i-ejensi yokumaketha eyathuthukisa le nqubo ithi lezi zimishwana zahlehliselwa abantu abangenakuqonda, beziphoqa ukuba zithenge iziphuzo ezithambile kanye ne-popcorn.
Le ndlela yokuthengisa ekhulayo yakhululwa, eyabangela ukucasuka. Umphakathi wawubheka njengokungavumelekile ukuphazamiseka kubantu abanesimo sengqondo futhi besaba imiphumela emibi. Kamuva kwafunyanwa ukuthi konke lokhu kuhlaselwa kungumkhuba wokukhangisa, futhi ukwesaba kwakuyize. Iqembu labososayensi laphendukela kuJames Vaiker futhi lafuna ukuphinda lelivivinyo phambi kwekhomishini eqoqwe ngokukhethekile. Umphumela wabadumaza: ngemva kokubukela ifilimu , ukuziphatha kwabantu akuzange kushintshe. Ngemuva kwalokho, ukuthuthukiswa kwezindlela zokuthonya i-subconscious kwaqhutshwa kuphela kuma laboratories angasese, futhi ukuhlolwa komphakathi kwavinjelwa.
Inzalo ephindaphindiwe kuhlaka lwama-25 yavela kuma-70s. Ezikhathini zokudlala, amafilimu amasha ayasakazwa, lapho isisindo sokufa sishaya khona, amaqembu e-rock aqala ukusebenzisa imisho efundwe ngokuphambene nama-albhamu abo, njll. Nokho, la maqiniso achazwe kuphela ngcintiswano yokudumile, futhi bambalwa abakholelwa ekuthandeni kwabo engqondweni. Ngaleso sikhathi, igama elithi "amafreyimu angu-25" livele, okusho ukuthi kungenzeka ukwazi ukwaziswa okungenasici ekuqapheliseni ngezindlela zikagesi.
Ngenxa yezimfashini zetfashini, abaningi manje banesithakazelo sokulahlekelwa isisindo. Indlela ethandwa kakhulu yokufeza le njongo ukudla. Kuphela akuwona wonke umuntu ongamlandela ngokuthembeka, enqaba njalo izitsha zakhe ezidlayo nezintandokazi. Ngaphezu kwalokho, iningi lezidlo ezihlongozwayo zithatha ukukhipha okuphelele ekudleni kwezidakamizwa ezidingekayo esimweni esihle sesikhumba futhi jikelele ngokusebenza kahle komzimba. Ngenxa yalokho, isikhumba esincane sinokubiza kakhulu: isikhumba siyaba yingxaki futhi some ngenxa ye-beriberi, futhi impilo iqala ukungasebenzi futhi idinga ukunakekelwa okwandisiwe.
Ngingafuni ukukhokha intengo ephakeme kakhulu ye-slenderness, abaningi bafuna izindlela ezihlukile zokulahlekelwa isisindo, ukushaya izintaba zezincwadi kanye nokwaziswa kusuka kwimithombo yezintambo. Futhi ekugcineni uthole indlela yemilingo yokuba ngu-Angelina Jolie izinsuku ezimbalwa ngaphandle kokudla kanye nomzamo.
Le ndlela ikhangiswe kahle futhi isetshenziselwa uhlelo "amafomu angu-25 okwehla kwesisindo." Kukhona amahemuhemu amaningi ngale ndlela, njengoba isakazwa iminyaka engaphezu kwengu-50. Abagqugquzeli balolu hlelo bakhuluma ngakho njengendlela yokuhlukunyezwa, ngokungahambisani nhlobo nangenhlanhla kuletha ulwazi kumuntu ongenandaba nokuxazulula izinkinga zakho. Baqinisa izilaleli ngokuphumelelayo ngokuphumelela kohlelo, okuthembisa ukulahlekelwa isisindo ngesikhathi esifushane kakhulu.
Ngingakwazi yini ukulahlekelwa isisindo ngama-25 ozimele
Omunye uphendula ngokuzithandela ngale ndlela, futhi omunye uthi lokhu kuyindlela enye yokupompa imali kumakhasimende angama-naive. Ukuze sithole iqiniso, ake sichaze umqondo we "ukulahlekelwa isisindo". Kuyinto inqubo eyimfihlo kakhulu yenyama ngayinye, ehambisana nezinga lokunciphisa umzimba. Okusho ukuthi, ukwehlisa isisindo, sidinga ukusheshisa umzimba, noma ususe ekudleni okunamafutha amaningi, okuzoguqulwa ngamafutha. Futhi imishwana ye-screen on-screen ku-25-frame technology ngeke isisize kulokhu. Ukunciphisa umzimba kuzosiza kuphela iminyaka emibili efakazelwe - ukudla nokuzivocavoca (ukugijima, ukubhukuda, ibhayisikili, njll), futhi uhlelo "ama-25 ozimele" lungasetshenziswa njengendlela eyengeziwe yokusikisela okuzenzakalelayo. Ukusetshenziswa okuhlukile komgwaqo ngeke kuveze imiphumela.
Kubhalwe ngokukhethekile ngokukhangisa lolu hlelo kubantu abafuna ukufunda isiNgisi. Amafreyimu angu-25 anikezwa ukuze emva kwemizuzu engu-10 ufunde usufuna ukuthenga i-disc. Nansi isici esivela kulesi sikhangiso:
"Iqembu labakhiqizi bezakhiwo ezizimele badala uhlelo lwe-multimedia nolwazi lokufunda ulimi lwesiNgisi. Kusekelwe esimisweni sokukhumbuza kakhulu ukukhanda ngekhanda ngokusebenzisa indlela yokusikisela yokusikisela (uhlaka lwama-25), okuvumela ukuthi isihloko sifunde ulwazi ngokudlula umbono obucayi. Ngakapheli inyanga uzokwazi ukufunda isiNgisi ngokuphila (amagama angu-7000 ezingeni elihlonishwayo, nakuba kunelungelo lokukwazi ukuxhumana nokukhululeka kwama-2500). Kudingekile ukuthi ubuke ukulandelana kwevidyo kohlelo kuphela imizuzu engu-15-20 kuphela ngosuku. "
Futhi njengoba kunjalo
Kungani ukukhangisa kuphumelela kangaka? Isizathu esiyinhloko isitayela sesayensi salesi sihloko. Umbhali uhlakazeka kalula ngemigomo yesayensi ngaphandle kokuchaza incazelo yawo. Lokhu kufanele kuvezwe, nakuba iningi lizobangela ukugqugquzelwa okwengeziwe. Manje ake sihlaziye okuqukethwe okuqukethwe.
Okokuqala, umbhali akanikezi nhlobo emithonjeni eqinisekisa amagama akhe. Okwesibili, ubuchopho bomuntu buyakwazi ukuthola ulwazi oluncane. Kodwa iqiniso liwukuthi lizohlala lingenalutho. Umuntu akakwazi ukukhipha enkumbulweni yakhe lokho okungenele lapho kugqogqa ukuqonda kwakhe.
Ngaphansi kwezimo ezivamile, uhlala ungenalwazi. Ngakho-ke, ukuvunyelwa kokukhangisa mayelana nezakhiwo ezimangalisayo zenkumbulo ngokuhlanganisa inani elikhulu lwedatha elizungeze umbono obucayi ngamaqiniso angama-half. Ekukhangiseni, kukhona inkulumo mayelana nokufaniswa kwamagama ezingeni lokuqashelwa. Okusho ukuthi, lapho umuntu eboniswa lawa mazwi, uyawaqaphela futhi athi: "Yebo, sengibonile kakade," kodwa akunakwenzeka ukuba akwazi ukutshela ngencazelo yawo.
Futhi wona kanye umqondo wokulinganisa ulwazi kolunye ulimi ngokulandela inani lamagama afundiwe akuyona into emangalisa kuphela, kepha futhi iyisiwula. Phela, ulwazi lolimi aluhlosiwe ngomqondo wokuqashelwa kwamagama, kodwa ngokukwazi ukuqonda inkulumo, nokubhala, ukufunda nokukhuluma ngolunye ulimi.
Odokotela baseRussia basebenzisa inqubo yama-25 ama-frames ku-narcology iminyaka engaphezu kwengu-15. Kuphikisana kuphela neziguli ezine-schizophrenia kanye nesithuthwane. Ngokusho odokotela, ukusebenza kwayo kuphakeme kakhulu.
Sizokutshela ngokufushane mayelana nokwelapha uqobo. Isikhathi esithile isiguli asigwema izidakamizwa noma utshwala. Bese bamtshela mayelana nebhola lama-25, futhi yena ngokwakhe wenza umsebenzi wakhe. Isibonelo, "Angiyikusebenzisa izidakamizwa iminyaka emithathu". Emva kwalokho, isiguli sibheka ingxenye yehora yevidiyo ngenombolo 3, inkulumo ethi "iminyaka emithathu ngaphandle kwezidakamizwa" kanye nezinye, zifakwe efomini yamafomu angu-25, okungafaki ukungena ngaphansi kokungena kwakhe. Kuye ngesigaba sesifo, iseshini esisodwa noma ngaphezulu senziwa.
Ochwepheshe abangahlangene nama-frames angu-25 athi: "Akukho lutho olumangalisayo, ngoba kanyekanye nohlelo lwezinhlaka ezingama-25 odokotela basebenzisa i-psychotherapy evamile. Futhi akucaci ukuthi yini eyasiza ngokuqondile isiguli. Kodwa uma uphikisana ngokuphikisanayo, cishe, lokhu kuyisiphakamiso esijwayelekile somuntu siqu. "
Sithemba ukuthi ngemuva kokuba ubuchwepheshe be-frame 25 buvezwe mayelana nokulahlekelwa kwesisindo, ukufunda isiNgisi nokuphatha umlutha, ngeke ube nemibuzo mayelana nokuphumelela kwayo ekudoneni imali. Ungabheke amahhala! Futhi ungathembeli kule nqubo, njengama-frames angu-25. Ukukhanga imali Mhlawumbe kuphela ngokuthola imali yabo. Ngakho-ke, ukuthola imali oyidingayo, yenza uhlelo oluthile futhi uqale ukuyisebenzisa ngesinyathelo ngesinyathelo.
Amanothi angu-25 athandwa kakhulu nge-scammers. Benza kanjani lokhu? Lolu hlelo lulula futhi lubizwa ngokuthi "i-SMS-scam". "Uhlukunyezwa" ufika ekhasini ngekhwalithi yokukhangisa, lapho anikezwa khona ukulanda amafreyimu angu-25 okusindiswa, ukufunda ulimi, njll. Kodwa ukuthola isixhumanisi, udinga ukuthumela i-SMS kwinombolo emfushane. Kuyacaca ukuthi esimweni sokuthumela i-SMS kusuka efonini yonke imali izokwenziwa, futhi akukho sixhumanisi esizofika. Futhi ama-scammers anikela ukulanda uhlelo mahhala. Kodwa-ke, ngesipho esinjalo esivulekile, ukwakhiwa komunye noma ama-virus amaningi, angeke aqoqe kuphela ulwazi oluvela kwikhompyutha yakho, kodwa futhi asuse ngokuphelele i-hard drive. Futhi ungathembeki ekuthembekeni kwesofthiwe ye-antivirus - abakwazi ngaso sonke isikhathi ukusiza.
Kungakhathaliseki ukuthi kudunyiswa kanjani umphumela wamafrimu angu-25, kungumkhuba wokukhangisa nje. Ngosizo lwale nqubo akunakwenzeka ukulahlekelwa isisindo, ukuheha imali, ukufunda isiNgisi, ukwelapha izidakamizwa, njll Ungabheke izindlela ezilula, kodwa sebenze kanzima - bese konke kuzovela!
Ukuhlanganiswa okuzenzakalelayo: ukubuyekezwa. Kusho okuzenzakalelayo okuzenzakalelayo
Yiziphi izinhlobo zehluzo owaziyo?
Amakilasi we-IP-amakheli. I-Class A, B, C ikheli le-IP
Ungasusa kanjani i-akhawunti ku "I-Telegram"?
Yimaphi ama-CD akhona? Ama-discs we-RW nezinye
Uyini umugqa kuhlukane?
"Ring nge oluluhlaza": abadlali melodrama Ukrainian